Nkọwa ngwaahịa: Washine na-enye palette akwụkwọ nwere nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-emebe eserese bụ enweghị ntụsara ahụ. Enwere ike imepụta ihe osise dị egwu maka nsonaazụ dị elu, dị ka ihe osise enweghị nke ọma, CMYK & PANTONE agba akwụkwọ, ihe akwụkwọ dị iche iche, lamination na foil stamping & UV for your logo. Teknụzụ akụrụngwa na ngwụcha: a na-eji paịlị 1000 gram na akwụkwọ mmịkọ gram 157 mee ihe maka ijiji, elu ihe eji eme matt na mbipụta UV. ị nwere ike d ...
Nkọwa ngwaahịa: Washine na-enye palette akwụkwọ nwere nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-emebe eserese bụ enweghị ntụsara ahụ. Enwere ike imepụta ihe osise dị egwu maka nsonaazụ dị elu, dị ka ihe osise enweghị nke ọma, CMYK & PANTONE agba akwụkwọ, ihe akwụkwọ dị iche iche, lamination na foil stamping & UV for your logo. Teknụzụ akụrụngwa na ngwụcha: a na-eji palette paịtọ 1000 gram na akwụkwọ mmado gram 120 mee ihe maka mkpuchi, elu imecha na-eme matt, stamping. ị nwere ike ịme ...
Nkọwa ngwaahịa: Washine na-enye palette akwụkwọ nwere nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-emebe eserese bụ enweghị ntụsara ahụ. Enwere ike imepụta ihe osise dị egwu maka nsonaazụ dị elu, dị ka ihe osise enweghị nke ọma, CMYK & PANTONE agba akwụkwọ, ihe akwụkwọ dị iche iche, lamination na foil stamping & UV for your logo. Ihe: a na-eji paịlị paịlet 1000 greyboard na 110 grasia akwụkwọ pụrụ iche maka imechi akwụkwọ, ị nwere ike iji mkpịsị ọkụ, UV, akwụkwọ silk, embossing / deboss…
Nkọwa ngwaahịa: Washine na-enye palette akwụkwọ nwere nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-emebe eserese bụ enweghị ntụsara ahụ. Enwere ike imepụta ihe osise dị egwu maka nsonaazụ dị elu, dị ka ihe osise enweghị nke ọma, CMYK & PANTONE agba akwụkwọ, ihe akwụkwọ dị iche iche, lamination na foil stamping & UV for your logo. Teknụzụ akụrụngwa na ngwụcha: a na-eji paịlị 1000 gragram na akwụkwọ mmado gram 120 mee ihe maka mkpuchi, ihe a na-eme ka a na-eme ya, na-apị ihe na ya.
Nkọwa ngwaahịa: Washine na-enye palette akwụkwọ nwere nhọrọ dị ukwuu mgbe ị na-emebe eserese bụ enweghị ntụsara ahụ. Enwere ike imepụta ihe osise dị egwu maka nsonaazụ dị elu, dị ka ihe osise enweghị nke ọma, CMYK & PANTONE agba akwụkwọ, ihe akwụkwọ dị iche iche, lamination na foil stamping & UV for your logo. Ihe: a na-eji paịlị paịlet 1000 gram na 110 grams akwụkwọ edo edo edo edo edo edo edo edo edo iji mechie akara gị, ị nwere ike iji akwụkwọ ọkụ, UV, akwụkwọ silk, embossing / debos…